နားလညျမှုရှိတဲ့ ဇနီးမောငျနှံတှဟော မရှိအတူ/ရှိအတူနဲ့ လောကဓံကိုရငျဆိုငျကွတယျ - Celegroup
HomeKnowledgeနားလညျမှုရှိတဲ့ ဇနီးမောငျနှံတှဟော မရှိအတူ/ရှိအတူနဲ့ လောကဓံကိုရငျဆိုငျကွတယျ
ဘဝ တဈခုကို အတူတညျဆောကျကွတဲ့အခါ ငှကွေေး ခမျြးသာမှု ထကျ စိတျခမျြးသာမှုက ပိုအရေးကွီးပါတယျ. . .ငှကွေေးခမျြးသာမှုနောကျကို လိုကျရငျး ပူလောငျနရေတာထကျ မရှိအတူ ရှိအတူ လကျတှဲပွီး ဘဝ ကိုပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးရတာက ပိုပွီး အဓိပ်ပာယျရှိပါတယျ။
ဘဝ အတှကျ ငှေ ကို တတျနိုငျသလောကျရှာပါ. . .ငှရှေိတဲ့ အခြိနျမှာ ဘဝကို ပြျောရှငျ စှာဖွတျသနျးပါ. ..တခြို့တှကေတော့ ငှကွေေးခမျြးသာနခြေိနျမှာတောငျ တဈဦးအပျေါတဈဦး နားလညျမှုတှေ မရှိကွတဲ့အခါ မပြျောရှငျရဘဲ ပူလောငျနကွေရပါတယျ။
ခဈြသူ နှဈဦး၊ ဇနီးမောငျနှံ နှဈယောကျ ဒါမှ မဟုတျ မိသားစု တဈစုဟာ ငှရှေိခြိနျမှာ အဆငျပွပွေနေနေိုငျပွီး ပြျောရှငျ ဖို့လှယျသလောကျ အဆငျမပွမှေုတှနေဲ့ ငှကွေေးအခကျအခဲ ဖွဈနခြေိနျမှာ တဈဦးနဲ့ တဈဦး အဆငျဆငျပွပွေေ နထေိုငျကွဖို့ ခကျခဲလာတတျကွပါတယျ။
သခြောစဉျးစားကွညျ့ကွရအောငျ. . .သငျတို့ ခဈြသူ နှဈဦး / ဇနီးမောငျနှံ နှဈဦး အဆငျမပွမှေုတှနေဲ့ ငှကွေေးခကျခဲနခြေိနျမှာ စိတျဆငျးရဲကွရတာဟာ ကိုယျတဈယောကျထဲလား ဆိုတာကိုပေါ့. . . .။
ခဈြသူ နှဈဦး / ဇနီးမောငျနှံ နှဈဦးမှာ အဆငျမပွမှေုတှနေဲ့ ငှကွေေးခကျခဲနခြေိနျမှာ စိတျဆငျးရဲရတာဟာ နှဈဦးစလုံးပါပဲ. . .ယောကျကြားဖွဈသူကလညျး ငှရှောမပေးနိုငျတဲ့အတှကျ စိတျအားငယျပွီး ကိုယျ့မိနျးမအတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သိမျငယျသလို ခံစားရပါတယျ။
မိနျးမဖွဈသူကလညျး သုံးစရာ ငှမေရှိတဲ့အခါ စိတျအားငယျရ ပတျဝနျးကငျြမှာ မကျြနှာငယျရ ဖွဈရပါတယျ။
ဒီလိုအခြိနျမှာ အမြားစု မှားတတျတာက စိတျညဈတာကို မှားယှငျးစှာ ထှကျပေါကျရှာမိကွတာပါပဲ. . .မိနျးမဖွဈသူက စိတျညဈနတောကို ထှကျပေါကျရှာတဲ့အနနေဲ့ ယောကျကြားဖွဈသူကို အဖွဈမရှိဘူး လူညံ့ ငှမေရှာနိုငျဘူး ဆိုပွီး အပွဈတငျမယျ. . .ယောကျကြားဖွဈသူက ထှကျပေါကျရှာတဲ့ အနေဲ့ အရကျသောကျမယျ. .မူးမယျ. .ပွီးရငျ ရနျပွနျဖွဈမယျ. . .။
ဒါတှဟော မိသားစု တဈစု ပွိုကှဲစမေယျ့ လမျးစတှပေါပဲ
သငျတို့ ဇနီး မောငျနှံ အဆငျမ ပွခြေိနျ ငှကွေေးခကျခဲနခြေိနျမှာ တဈဦးမကျြနှာ ကို တဈဦး သခြောကွညျ့ဖူးရဲ့လား? မကွညျ့ဖူးသေးရငျ သခြောကွညျ့ ကွညျ့ပါ. . .နှဈဦးစလုံးရဲ့ မကျြနှာမှာ ပူလောငျမှုတှနေဲ့ ညှိုးနှမျးနတောကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ. . .ဒီအခြိနျမှာ အလိုအပျဆုံးက တဈဦးကို တဈဦး ပိုပွီး ဂရုစိုကျရမှာပါ. .ပိုပွီး နားလညျမှုပေးရမှာပါ. . .ပိုပွီးကွငျနာမှုပေေးရမှာပါ. . .။
အဆငျပွခြေိနျမှာ အတူတူပြျောရှငျခဲ့ကွသလို အဆငျမပွခြေိနျမှာလညျး တဈဦးကိုတဈဦး နှဈသိမျ့ပေးပွီး အခကျအခဲတှကေို အတူရငျဆိုငျကြျောဖွတျကွမှသာ သာယာတဲ့ ဘဝတဈခုကို တညျဆောကျနိုငျကွမှာ ဖွဈပါတယျအားလုံးပြျောရှငျတဲ့ မိသားစုဘဝကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။ Credit : burmese.asia
နားလည်မှုရှိတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေဟာ မရှိအတူ/ရှိအတူနဲ့ လောကဓံကိုရင်ဆိုင်ကြတယ်
ဘဝ တစ်ခုကို အတူတည်ဆောက်ကြတဲ့အခါ ငွေကြေး ချမ်းသာမှု ထက် စိတ်ချမ်းသာမှုက ပိုအရေးကြီးပါတယ်. . .ငွေကြေးချမ်းသာမှုနောက်ကို လိုက်ရင်း ပူလောင်နေရတာထက် မရှိအတူ ရှိအတူ လက်တွဲပြီး ဘဝ ကိုပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းရတာက ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။
ဘဝ အတွက် ငွေ ကို တတ်နိုင်သလောက်ရှာပါ. . .ငွေရှိတဲ့ အချိန်မှာ ဘဝကို ပျော်ရွှင် စွာဖြတ်သန်းပါ. ..တချို့တွေကတော့ ငွေကြေးချမ်းသာနေချိန်မှာတောင် တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး နားလည်မှုတွေ မရှိကြတဲ့အခါ မပျော်ရွှင်ရဘဲ ပူလောင်နေကြရပါတယ်။
ချစ်သူ နှစ်ဦး၊ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက် ဒါမှ မဟုတ် မိသားစု တစ်စုဟာ ငွေရှိချိန်မှာ အဆင်ပြေပြေနေနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင် ဖို့လွယ်သလောက် အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ငွေကြေးအခက်အခဲ ဖြစ်နေချိန်မှာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အဆင်ဆင်ပြေပြေ နေထိုင်ကြဖို့ ခက်ခဲလာတတ်ကြပါတယ်။
သေချာစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်. . .သင်တို့ ချစ်သူ နှစ်ဦး / ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦး အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ငွေကြေးခက်ခဲနေချိန်မှာ စိတ်ဆင်းရဲကြရတာဟာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲလား ဆိုတာကိုပေါ့. . . .။
ချစ်သူ နှစ်ဦး / ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးမှာ အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ငွေကြေးခက်ခဲနေချိန်မှာ စိတ်ဆင်းရဲရတာဟာ နှစ်ဦးစလုံးပါပဲ. . .ယောက်ကျားဖြစ်သူကလည်း ငွေရှာမပေးနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်အားငယ်ပြီး ကိုယ့်မိန်းမအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိမ်ငယ်သလို ခံစားရပါတယ်။
မိန်းမဖြစ်သူကလည်း သုံးစရာ ငွေမရှိတဲ့အခါ စိတ်အားငယ်ရ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျက်နှာငယ်ရ ဖြစ်ရပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်မှာ အများစု မှားတတ်တာက စိတ်ညစ်တာကို မှားယွင်းစွာ ထွက်ပေါက်ရှာမိကြတာပါပဲ. . .မိန်းမဖြစ်သူက စိတ်ညစ်နေတာကို ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အနေနဲ့ ယောက်ကျားဖြစ်သူကို အဖြစ်မရှိဘူး လူညံ့ ငွေမရှာနိုင်ဘူး ဆိုပြီး အပြစ်တင်မယ်. . .ယောက်ကျားဖြစ်သူက ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့ အနေဲ့ အရက်သောက်မယ်. .မူးမယ်. .ပြီးရင် ရန်ပြန်ဖြစ်မယ်. . .။
ဒါတွေဟာ မိသားစု တစ်စု ပြိုကွဲစေမယ့် လမ်းစတွေပါပဲ
သင်တို့ ဇနီး မောင်နှံ အဆင်မ ပြေချိန် ငွေကြေးခက်ခဲနေချိန်မှာ တစ်ဦးမျက်နှာ ကို တစ်ဦး သေချာကြည့်ဖူးရဲ့လား? မကြည့်ဖူးသေးရင် သေချာကြည့် ကြည့်ပါ. . .နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ မျက်နှာမှာ ပူလောင်မှုတွေနဲ့ ညှိုးနွမ်းနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်. . .ဒီအချိန်မှာ အလိုအပ်ဆုံးက တစ်ဦးကို တစ်ဦး ပိုပြီး ဂရုစိုက်ရမှာပါ. .ပိုပြီး နားလည်မှုပေးရမှာပါ. . .ပိုပြီးကြင်နာမှုပေေးရမှာပါ. . .။
အဆင်ပြေချိန်မှာ အတူတူပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသလို အဆင်မပြေချိန်မှာလည်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နှစ်သိမ့်ပေးပြီး အခက်အခဲတွေကို အတူရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ကြမှသာ သာယာတဲ့ ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ Credit : burmese.asia